Fikirka Naqshadeynta: Codsashada Rose, Bud, Hawlaha Qodaxda ee Suuqgeynta | Martech Zone
Toddobaadkan wuxuu ahaa mid aad u xiiso badan maadaama aan la shaqeynayay qaar ka mid ah la taliyayaasha shirkadaha ka socda Salesforce iyo shirkad kale si aan u arko sida aan u horumarin karo kal-fadhiyada istiraatiijiyadeed ee macaamiishooda. Farqiga weyn ee warshadeenna hadda waa in shirkaduhu inta badan leeyihiin miisaaniyadda iyo ilaha, mararka qaarkood ay leeyihiin qalab, laakiin inta badan ma laha istiraatiijiyad ay ku bilaabaan qorshe fulin habboon.
Hal codsi oo ay ku qaadaan wadada macmiil walba waa nashqadeynta fikirka naqshadeynta ee loo yaqaan "Rose, bud, qodax". Fududeynta jimicsiga iyo mawduucyada lagu aqoonsaday waxay ka dhigaysaa habab aad u xoog badan oo tilmaamaya dulduleelada dadaalka suuqgeyntaada.
Casaan, buluug, iyo cagaar qoraalo dheg dheg ah
Gidaar badan ama sabuurad fara badan
Fududeeye inuu waxyaabaha ku ilaaliyo wadada
2 ilaa 4 qof oo muhiim ah oo fahamsan hanaanka
Waxaa laga yaabaa inaad hirgelinayso tikniyoolajiyad suuqgeyn cusub si aad ugu horumariso safarada iswada ee macaamiishaada. Mashruuca waxaa laga yaabaa inuu istaago qaylada maadaama aadan runti garanayn meesha aad ka bilaabi lahayd qorshayntaada. Tani waa halka ay ku soo kacday, budada, qodaxdu waxtar ayey u yeelan karaan.
Rose - Maxay shaqeyneysaa?
Ka bilow qoritaanka waxa ka shaqeeya hirgelinta. Waxaa laga yaabaa in tababarku uu ahaa mid aad u fiican ama sahlanaanta isticmaalka barxadda. Waxaa laga yaabaa inaad haysato ilo aad u fiican kooxdaada ama dhinac saddexaad oo aad ku caawiso. Waxay noqon kartaa wax… kaliya qor waxa shaqeeya.
Bud - Waa maxay Fursadaha?
Markaad bilowdo inaad ku dhex shubto dadkaaga, hawsha, iyo barxadda, fursadaha qaarkood ayaa kor u kici doona. Waxaa laga yaabaa in barxadku bixiyo adeegyo bulsheed, xayeysiis, ama awoodo fariin qoraal ah oo kaa caawin kara inaad si wanaagsan u bartilmaameedsato rajadaada badan ee kanaalka. Waxaa laga yaabaa inay jiraan waxyaabo isku dhafan oo la heli karo si loogu daro sirdoonka farsamada mustaqbalka. Waxay noqon kartaa wax kasta!
Qodax - Maxaa Jabay?
Markaad falanqeyneyso mashruucaaga, waxaa laga yaabaa inaad aqoonsato waxyaabo maqan, niyad jab leh, ama kuwa fashilmay. Waxaa laga yaabaa inay tahay waqtiga, ama aadan haysan xog kugu filan oo aad go'aanno ku gaarto.
Haddii aad ku bixisid 30 ilaa 45 daqiiqadood oo wanaagsan oo aad kooxdaada ku xoojineyso inaad soo dhigto qoraallo oo aad ka fikirto wax kasta oo suurtogal ah ee soo baxa, buro, ama qodax, waxaa laga yaabaa in lagaa tago ururinta qoraallo dhegdheg ah meel kasta. Adiga oo fikradahaaga oo dhan ka bixiya qoraalada midabbada leh oo aad abaabusho, waxaad arki doontaa mawduucyo soo baxaya oo aadan horay u arag.
Tallaabada xigta waa in la ururiyo qoraalada, howshan ayaa loo yaqaan khariidaynta xiriirka. U adeegso kala soocista si aad ugu dhaqaaqdid qoraalada isla markaana aad uga abaabusho sida ubax, geedo, qodax ilaa geeddi socodka dhabta ah. Marka laga hadlayo dadaalka suuqgeyntaada, waxaa laga yaabaa inaad rabto dhowr tiirar:
Discovery - cilmi baarista iyo xogta loo baahan yahay si loo qorsheeyo dadaalka suuq geynta.
Strategy - dadaalka suuq geynta.
Hirgelinta - qalabka iyo ilaha loo baahan yahay si loo dhiso hindisaha suuqgeynta.
fulinta - ilaha, yoolalka, iyo cabbiraadda waxqabadka.
Dhiciyaan - macnaheedu waa in lagu horumariyo dadaalka waqtiga dhabta ah ama waqtiga soo socda.
Markaad u guurto qoraaladaada qeybahan, waxaad arki doontaa qaar ka mid ah mowduucyada waaweyn ee bilaabmay inay muuqdaan. Waxaa laga yaabaa inaad xitaa arki doontid mid ka cagaar badan… kaa caawinaya inaad aragto halka jid-gooyuhu yaallo si aad go'aan uga gaadho sida ugu habboon ee loogu riixo.
Kani waa jimicsi fudud oo looga faa'iideysto fikirka naqshadeynta. Fikirka naqshadeynta waa ficil aad u ballaaran oo badanaa lagu dabaqo nashqadeynta khibrada isticmaale, laakiin wuxuu u xuubsiibanayaa caawinta ganacsiyada wax ka qabashada arrimaha waaweyn sidoo kale.
Waxaa jira 5 marxaladood oo fikirka naqshadeynta ah - xooji, qeex, fikrad, nooc, iyo tijaabo. Isku ekaanshaha kuwaas iyo kan safarka suuq geynta Waxaan horumaray ma ahayn shil!
Waxaan kugu dhiirigelin lahaa inaad koorso qaadato, aad daawato fiidiyowyo, ama xitaa iibso buug ku saabsan Fikirka Naqshadeynta, waxay wax ka beddeleysaa sida ay ganacsiyadu u shaqeynayaan. Haddii aad hayso wax talo bixin ah, fadlan ku dhaaf faallooyinka!
Tags: Activityburuunfikirka naqshadeyntafikirkamarketingistaraatijiyad marketingkacaykacay bud qodaxistaraatijiyadThorne
Ciyaarta Ciyaarta: Ku dar lakab Gamification ah Nidaam kasta